Itoobiya ma waxay wajeheysaa caqabado la mid ah kuwa Soomaaliya | Hangool News
Itoobiya ma waxay wajeheysaa caqabado la mid ah kuwa Soomaaliya
Hangoolnews;- Maamulka gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa la filayaa in beri ay ka dhacdo doorasho u gaar ah oo khilaaf uu ka taagan yahay.
Dadka ka faallooda arrimaha geeska Afrika waxay u sababeynayaa nidhaamka federaalka iyo saameynta ka dhalata.
Soomaaliya oo ka mid ah dalalka hannaanka Federaalka qaatay ee Geeska Afrika, waxay wajeheysaa caqabado ay ka mid yihiin “kala soocnaanta awoodaha maamullada iyo dowladda dhexe iyo hay’adaha fulinta”.
Soomaaliyana waxaa sidoo kale horey uga dhacay khilaafaad la xiriiray arrimaha doorashada maamul goboleedyada iyo cidda gacanta ku hayneysa.
Dhibaatooyiinka isku midka ah
Dowladda Federaalka ee Itoobiya iyo maamulka Tigreega ayaa in muddo ku muransanaa arrimaha doorashada oo ay dowladdu dhexe dib u dhigtay taas oo la xiriirtay saameynta fayarska Korona.
Dhanka Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyadana waxay weli isku mari la’ yihiin sidii heshiis looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka.
Madaxda maamulllada Konfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug ayaa lagu wadaa in beri oo arbaca ah ka qeybgalaan shir uga furmo magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Madaxda sedexda maamul goboleed ayaa ka dib la filayaa in ay Muqdisho uga qeybgalaan shir guud oo maamullada iyo dowladda dhexe ka wada qeybgalayaan.
Feysal Rooble oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika ayaa xaaladda ka taagan dhanka Itoobiya ku tilmaamay mid ah ismari waa sababay in Tigreega iyo dowladda Dhexe ay isku khilaafaan dib u dhigista doorashada.
“Dowladdu Federaalku waxay sheegeysaa in uusan sharciba ahayn in dowlad deegaanka Tigreega iskood u qabtaan doorasho, kuwa tigreegana waxay ku doodayaan cahdi qarameedka u yaalla in uu fasaxaya”.
Inta badan nidaamka federaalka ee Soomaaliya iyo Itoobiyaba waxaa saldhig u ah sharciyada u yaalla dowladaha dhexe iyo kuwa maamulada oo qeexaya awoodaha, sida uu sheegayo Feysal Rooble.
“Federaalka waxaa lagu sheegay in leeyahay sharci qaran oo kala saaran dadka, kan Soomaaliya iyo kan Itoobiya, labaduba waxay xadeynayaan awoodda dowladaha dhexe ay leeyhiin isla markaana awoodo badan ay siinayaan dowlad goboleedyada, marka waxaad mooddaa in labada ay ka taagan yihiin arrimo ay isku afgaran la’yihiin oo ah xadka ay dowladda federaalka leedahay iyo meesha awooddu ka bilaabmato.”
“Kan Itoobiya qodobka 52-aad wuxuu sheegayaa in wax alle wixii ka soo hara awoodda dowladda dhexe ay leeyihiin dowlad goboleedyada, kan doorashada waxay dadka qaarkood u micneysaa in ay gacanta ugu jirto dowlad goboleedyada oo aanay dowladdu Federaalku waqtiga la qabanayo iyo sida uu u dhacayo aanay waxbo shuqul ku laheyn,” ayuu yiri Feysal Rooble.
Dr Cabdi Wahaab Sheekh Cabdisamad oo ka falooda arrimaha caalamka ayaa sheegaya in Abiy Axmed ay ka go’anatahay in “nidaamka Federaalka laga saaro Itoobiya, loona dhiso dowlad xoog badan oo mideysan”. Balse ma ahan arrin weli cad oo uu muujiyay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya.
Qoraalka sawirka,Farmaajo iyo Abiy oo xabadka isku salaamaya
“Meeshan waxaa is hardinayaa Abiy Axmed oo ay ka go’antahay in uu soo celiyo Itoobiyadii awoodda badneyd ee Menelik iyo Mengistu iyo Haile Selassie, oo la baaba’sho waxa loo yaqaano nidaamka federaalka ee Itoobiya oo dowladda mideysan uu dalka ku soo dabaalo oo markaa uu arko Itoobiya xoog leh.”
“Soomaaliya waa taa hadda la isku keeni la’yahay aad arkeyso. Soomaalida waa dad isku diin ah, waa dad isku dhaqan ah waa dad isku af ah, waana dad dhinac walba isaga eg. Federaalka waxaa ilaalsha dad kala aragti duwan, dad kala dhaqan ah oo kala diin ah oo kala af ah; oo na kala midab ah…. waa nidaam caqabadihiisa iyo dhibaatooyinkiisa ay taagan yihiin… waa nidaam loogu talagalay Soomaaliya in haadaan looga tuuro,” ayuu yiri Dr Cabdiwahaab.
Itoobiya waxaa ka qabsoomay is badalo siyaasadeed tan iyo markii uu xilka la wareegay Ra’iisul wasaare Abiy Axmed, waxaa furfurantay siyaasadda dalka, haddaba, arrintaas saameyn maku leedahay khilaafka ka dhex taagan maamul goboleedyada qaar iyo dowladda dhexe ee Itoobiya?
Dr Cabdiwahaab ayaa sheegay: “Dowladda dhexe oo daciiftay, nidaamkii kaligii taliska ahaa oo sidii hore aan u jirin iyo Tigreega oo markii hore qolada ugu tunka weyn ka heyd nidaamkii hore ayaa hadda gaar isku taagtay.”
Aqalka sare ee Itoobiya: “Doorasha ka dhacdo deegaanka Tigreega waa sharci darro lamana aqbali doono”
Sidee u aragtaa baaqa Farmaajo ee ah in Dhuusamareeb magaca laga badalo?
Farmaajo oo loogu baaqay inuu diido baaqa Dhuusamareeb
Feysal wuxuu ka dhawaajiyay in arrimaha ay ka biyo diidsan yihiin maamullada qaar ee Itoobiya ay yihiin in dowladda dhexe ay dooneyso inay majaxaabiso nidaamka federaalka.
“Waa in dib loogu noqdo micnaha iyo turjubaadda saxda ah ee ku qeexan ama ku hoos jirta cahdigan, waxyaabaha badan ee ay Tigreega ka biyo diidayaan waa arrinta doorashada oo ay rabaan in ay ku tijaabiyaan awoodda dowladda dhexe inta ay la egtahay waxayna sabab u yihiin waxyaabaha kale ee la isku diidan yahay sida qodobka 39-aad oo laga baqayo in Abiy uu ka saaro cahdiga qowmiyadaha xuquuqdooda siinayo,” ayuu yiri Dr Cabdi Wahaab.
Wuxuu sheegay in nidaamka Federaalka ee Soomaaliya uu shabaho midka Itoobiya oo kaga horeysay hannaankan. Waxay labaduba ku saleysan yihiin hab qowmiyad ama hab qabiil.
Dr Cabdi Wahaab wuxuu aaminsan yahay in labada dalba aanan sidii la rabay looga dhaqan gelin nidaamka Federaalka, sidaas darteedana uu markasta soo ifbaxo khilaaf.
“Doodda oroneyso Soomaaliya federaal ha noqoto waxay bilaabmatay 1981-dii, laakiin dooddan ah in Soomaaliya ay u baahan tahay federaal”.
“Itoobiya oo aan federaal aheyn bey indheer garadka Soomaalida gaar ahaan kuwa Waqooyga arrintan wadeen, sideeba nidaamka federaalka waa isku mid.. waxaad mooddaa labada dalba in nidaamkii federaalka hirgelintiisa laga gaabiyay”, ayuu BBC u sheegay Dr Cabdi Wahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Caalamka.